अघिल्ला दुई ५० अंकले बढेको नेप्समा बिहीबार १८ अंकको गिरावट – Nepali Digital Newspaper
अघिल्ला दुई ५० अंकले बढेको नेप्समा बिहीबार १८ अंकको गिरावट
मंगलबार र बुधबार करिब ५० अंकले उकालो लागेको धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बिहीबार भने दोहोरो अंकले ओरालो लागेको छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जका अनुसार सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक १८ दशमलव १२ अंकले घटेर एक हजार १५५ दशमलव ३० मा पुगेको छ । त्यस्तै सेन्सेटिभ परिसूचक ३ दशमलव ४९ अंकले घटेर २५२ दशमलव २१ मा झरेको छ । स्टकका अनुसार आज कुल १६६ कम्पनीको १२ लाख २४ हजार ५७२ कित्ता सेयर रु. ३९ करोड ९९ लाख ३० हजार ८७१ मा खरिद–बिक्री भयो ।
कारोबार भएका १२ उपसमूहमध्ये दुई उपसमूहको मात्र सेयर बढेको छ । व्यापार २ दशमलव ३७ र सामूहिक लगानी कोष शून्य दशमलव शून्य दुईले बढ्दा बैंकिङ १४ दशमलव ७९, होटेल ४८ दशमलव ९३, विकास बैंक ११ दशमलव ७८, जलविद्युत् १३ दशमलव २२, वित्त शून्य दशमलव ६९, निर्जीवन बिमा १०५ दशमलव ३२, उत्पादन ४४ दशमलव १२, अन्य १८ दशमलव २४, लघुवित्त १२ दशमलव ५६, जीवन बिमा १०५ दशमलव ६ अंकले घटेकोे छ ।
कारोबार रकमका आधारमा शिवम् सिमेन्ट शीर्ष स्थानमा रह्यो । सो कम्पनीको सेयर रु. पाँच करोड २४ लाख ६२ हजार ५७१ मा खरिद–बिक्री भयो । त्यस्तै प्रभु बैंक रु. दुई करोड ६७ लाख १५ हजार ७१७, सिद्धार्थ बैंक रु. एक करोड ८१ लाख ८० हजार ३८५, नेसनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था रु. एक करोड ७३ लाख ९८ हजार ९४६, नेपाल बैंक रु. एक करोड ६५ लाख ६० हजार २०४ र नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको सेयर रु. एक करोड ५२ लाख ७४ हजार ६३६ मा खरिद–बिक्री भए ।
परिसूचक घटे पनि समता माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताले १० प्रतिशतले कमाए । त्यस्तै एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक ७ दशमलव २२, नेसनल माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था ५ दशमलव ७६, आँखुखोला जलविद्युत कम्पनी ५ दशमलव ३६, नवील इक्विटी फन्ड ३ दशमलव ८० र मन्जुश्री फाइनान्सका शेयरधनीले ३ दशमलव २३ प्रतिशतले कमाए ।